श्रीमती गर्भवती भएपछि श्रीमानको भूमिका के हुन्छ ? - राेल्पा न्युज
गाेपाल खत्री calendar_today ८ बैशाख २०७७, 3:03 am
अहिले सबैको ध्यान कोरोनातर्फ मोडिएको छ । एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणको भय, अर्कोतर्फ अस्पताल आउजाउ गर्ने प्रतिकुलता । यो समस्याले सबैभन्दा बढी पिरोलेको हुनसक्छ, गर्भवतीलाई ।
गर्भावस्थामा चिन्तामुक्त हुनुपर्छ । गर्भवतीको शारीरिक मात्र होइन, मानसिक अवस्थाले पनि गर्भको बच्चालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले यतिबेला खुसी र ढुक्क हुन आवश्यक छ ।
यसका लागि घरको पारिवारिक वातावरण यस्तो हुनुपर्छ, जसले कुनै तनाव, बेचैनी, भया पैदा नगरोस् । यो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, श्रीमानले ।
श्रीमती गर्भवती भएपछि श्रीमानको जिम्मेवारी थपिन्छ । श्रीमतीको उचित हेरबिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमतीको खानपानदेखि सुत्ने–उठ्ने तालिका मिलाउनेसम्मको काममा श्रीमानले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिले धेरैजसो घरमा छन् । गर्भवती श्रीमतीको हेरचाह गर्नका लागि अनुकुलता पनि मिलेको छ । तर, प्रसूती गराउनुपर्ने, नियमित जाँच गराउनुपर्ने अवस्थामा के कस्ता तयारी गर्ने भनेर सर्तक अवस्थामा चाहि रहनुपर्छ । यसका लागि नजिकका अस्पताल, चिकित्सक, एम्बुलेन्स आदिसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ ।
श्रीमतीको मनोबल बढाउने
गर्भावस्थामा महिलामा हुने समस्या, कमजोरी आदिलाई श्रीमानले पनि अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । गर्भवती श्रीमती के कस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् भन्ने कुरा मनन गरेर त्यही अनुसार सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । श्रीमतीको आत्माविश्वास बढाउने, खुसी राख्ने कुरामा श्रीमानले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
बद्लिदो दिनचर्यालाई बुझौं
गर्भधारणपछि महिलाको काम गर्ने क्षमता कम हुन्छ, जो बच्चालाई जन्म दिइसकेको केहि दिनसम्म कायम रहन्छ । यस स्थितीमा घरको रुटिन नियमित नहुन सक्छ । श्रीमतीको अभावमा हुने कतिपय काममा श्रीमान अग्रसर हुनुपर्छ ।
गर्भवती श्रीमतीलाई चिकित्सकहाँ पु¥याउने, सही खानपान दिने, सहज पहिरन छनौट गरिदिने जस्ता कुरामा श्रीमानले ख्याल राख्नैपर्छ । यसबेला तपाईंले श्रीमतीको सामुन्ने राम्रो कुरा मात्र गर्नुहोस् । उसलाई राम्रो कुरा मात्र सुनाउनुहोस् । राम्रो काम मात्र देखाउनुहोस् । श्रीमतीको आसपास रहनुहोस्, ताकि उनले आफुलाई एक्लो र असुरक्षित महसुष नगरोस् । योग गराउनुहोस् ।
प्रसव पूर्व कक्षाको जरुरी
प्रसवको समयमा हुने के कस्ता अवस्था आउँछ भन्ने कुराको जानकारी श्रीमतीलाई हुनुपर्छ । कसरी प्रसवलाई सहज र कम पीडादायक बनाउने भन्ने कुरामा पनि श्रीमतीले आवश्यक जानकारी दिलाउनु पर्छ ।
समझदारीताका साथ काम गरौ
जब श्रीमती गर्भवती हुन्छ भने घरमा कुनै पार्टी, भोज आदि नगरौ । यस्ता कामले उनीहरुलाई झर्को लाग्न सक्छ र बोझिलो पनि ।
अनावश्यक परिवर्तनप्रति चनाखो रहनेगर्भावस्थामा विभिन्न किसिमको परिवर्तन हुन्छन् । त्यसमध्ये केहि स्वभाविक हुन्छन्, भने केहि अस्वभाविक । पत्नीमा कुनै अस्वभाविक परिवर्तन आइरहेको छ भने त्यसप्रति चनाखो हुनैपर्छ, ताकि गर्भवती श्रीमती र गर्भको बच्चालाई नराम्रो असर नपरोस् ।
जब श्रीमती गर्भवती हुन्छे, घरको आन्तरिक सज्जामा पनि थोरै परिवर्तन गर्नुहोस् । घरलाई खुला र शान्त देखिने सजावट गर्नुहोस् । प्राकृतिक सुगन्धित फूलहरु सजाउनुहोस् । घरको पर्दा, बेड कभर सफा र आकर्षक राख्नुहोस् ।
गाेपाल खत्री राेल्पा न्युजकाे सम्पादक हुनुहुन्छ ।
कुकुरले टोक्नसाथ के गर्ने ? यस्तो पाँच तरिका
राेल्पा न्युज calendar_today १७ असार २०७७, 1:30 pm
कवि दैवज्ञराज न्यौपानेले लेख्नुभएको कविता ‘किसान रहर’ आम नेपाली किसान दाजुभाइमा समर्पित छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश यो कविता उत्तिकै समय सान्दर्भिक छ ।
भोजपुरको गोगने-१, धाइपामा वि.सं. २००४ साल मंसिर ३० गते जन्मेका न्यौपानेको साहित्यिक यात्रा कविता लेखनबाट प्रारम्भ भएको हो । खासगरी वि.सं. २०२१ बाट कविता र गीतबाट लेखनबाट उनले साहित्यिक यात्रालाई मुर्तरुप दिएका हुन् । उलने बालसाहित्य र समालोचनाका क्षेत्रमा समेत कलम चलाएका छन् ।
शीर्षकः किसानको रहर
नगरी काम पुग्दैन खान साझ र बिहान
बिहानपख झुल्किनछ घाम देउराली पाखामा
आसरे गीत घन्किनछ अनि सुरिलो भाकामा
जीवन धान्नु गर्नु नै पर्ने उकाली ओराली
छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौंला
धमिलो खोला बाढीले होला कसरी तरेकी ?
गालामा साना पसिना दाना मोती झैं खुलेकी
घाम र पानी भोक र तिर्खा कसरी भुलेकी
जूनले पोख्छ शीतका थोपा धानका पातमा
सूनौला बाला झुलेर होला भूईंलाई छोएको
किसान बनी जहान पाल्ने यो मेरो रहर ।
राेल्पा न्युज calendar_today १६ असार २०७७, 3:45 am
१६ असार, सर्लाही । जिल्लाका किसानहरू लगाएको मकैको उचित मूल्य नपाउँदा चिन्तित बनेका छन्‌। आफूले लगाएको मकैमा फौजी कीराको सङ्क्रमणसँगै हावाहुरी र असिना-पानीबाट बचेको मकैको मूल्य नपाउँदा किसानहरू थप मारमा परका हुन्।
गाेपाल खत्री calendar_today १६ असार २०७७, 3:21 am
१५ असार, राेल्पा । माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ भाबाङ मा पशु शिविर सम्पन्न भएको छ । माडी गाउँपालिका पशु स्वास्थ्य शाखाद्वारा शिविर संचालन गरिएको हो ।
माडी गाउँपालिका-५ भावाङमा एक दिने पशु स्वास्थ्य शिविर सम्पन भएको छ । पशु स्वास्थ्य शाखा र वडा कार्यालयको आयोजनामा एक दिने निशुल्क पशु स्वास्थ्य माडी गाउँपालिका-५ भावाङमा सम्पन्न भएको हो ।
साेमबार माडी गाउँपालिका-५ भावाङका वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढा मगरले पशु स्वास्थ्य शिविरको उद्घघाटन गर्दै रोग लाग्नु भन्दा पुर्व सतर्कता अपनाउनु राम्रो भएको भन्दै रोग लागि सके पछि आपत बिपत संगै अप्ठारो स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने हुँदा माडी गाउँपालिका-५ भावाङ,राेल्पाले महामारी उत्पन हुनु पुर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्दै पशु बाट मानिसमा र मानिसबाट पशुमा सर्ने यस्ता प्राणघातक रोग नसरुन भनेर माडी गाउँपालिकाले निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
जुनिस कुमार बिष्ट calendar_today १६ असार २०७७, 2:52 am
१६ असार, राेल्पा । सुनछहरी गाउँपालिका पाेबाङमा तीन दिने तरकारी खेती सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमको आयोजना सुनछहरी गाउँपालिका कृषि शाखा पोबाङको आयोजनामा भएको हो।
कार्यक्रमको समापन गाउँपालिका उपाध्यक्ष पबित्रा घर्ती मगरले गर्नु भएको थियो ।तीन दिन सम्म चलेको तालिममा सुनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ सेरम,वडा नम्बर २ भित्रीगाम,वडा नम्बर ३ बाहिरीगाम ,वडा नम्बर ४ स्युरी,वडा नम्बर ५ जैमाकसला,वडा नम्बर ६ फगाम र वडा नम्बर ७ जेलबङका २५ जना कृषकहरूको सहभागी रहने कृषि शाखा संयोजक शिव कुमार झाले जानकारी दिनु भयो।
साथै तालिमामा आलु खेतीको लागि लगाउने तयारी,मलखाद व्यवस्थापन,अलैंची खेती बारे तथा अलैंची नर्सरी राख्ने तरिका र विभिन्न तरकारी खेती सम्बन्धि प्रबिधि, कम्पोस्ट मल बनाउने प्रबिधि,नेपालमा भर्खरै प्रवेश गरेको सलह किरा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,अमेरिकीन फौजी किरा किरा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ लगाएतको विषयमा सहभागीहरु लाई प्रशिक्षण गरिएको कृषि शाखाका संयोजक झाले बताउनु भयो।प्रशिक्षण कार्य सुनछहरी गाउँपालिका-१ सेरमका सिवम पाण्डे,सुनछहरी गाउँपालिका-४ का कृषि प्राबिधिक रेश्मी नेपाली,सुनछ्हरी गाउँपलिका-६ का कृषि प्राबिधिक कृष्णा गिरी कृषि शाखा संयोजक झाले दिनु भएको थियो।